musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Kwira Gomo reKilimanjaro neMharidzo yeTariro
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Makore makumi matanhatu apfuura, aimbove mukuru wemauto weTanzania, Late Alexander Nyirenda, akakwira Gomo reKilimanjaro uye ndokumisa Tanzania inozivikanwa "Freedom Torch" pamusoro pechando chakafukidzwa nesinou kukurudzira rugare, rudo, uye rukudzo kuvanhu ve Africa.
Chiitiko chakafanana chiri kurongwa kukwezva vanhu kuTanzania, Africa, nepasi rose.
Ichi chiitiko chichava chekufamba uyezve kukunda chando-chakafukidzwa pamusoro peGomo Kilimanjaro kutanga kwaZvita wegore rino - 2021.
Izvi zvinoenderana nekucherechedza makore makumi matanhatu erusununguko rweTanzania nenzira inoita mutsauko.
Vanokwira panguva ino vari kuzotumira meseji yetariro kubva ku "Roof of Africa" ​​kuti Tanzania nedzimwe nyika dze Africa dzakachengeteka pakufamba panguva ino apo majekiseni eCOVID-19 ari kuitika kunenge kondinendi yese.
Apo Tanzania yakabatidza yakakurumbira "Rusununguko Torch" pane iyo yepamusoro ye Gomo reKirimanjaro Makore makumi matanhatu apfuura, zvaifananidzira kupenya pamiganhu uye nekuunza tariro kuAfrica yese uko kwaive nekushaya tariro, rudo paive neruvengo, uye kuremekedza paive neruvengo.
Asi zvegore rino, vanokwira pamusoro pegomo reKilimanjaro vari kuzotumira meseji yetariro kuti Tanzania inzvimbo yakachengeteka kune vashanyi uyezve kuti Africa ikozvino yakachengeteka pakufamba mushure mekunge hurumende dzinoverengeka mukondinendi iyi dzatora matanho akasiyana siyana ekudzivirira denda iri. .
Mishandirapamwe yekukwezva vanhu vanobva kumatunhu akasiyana e Africa nepasi rose kuti vakunde nzvimbo yepamusoro soro ye Africa chikamu chemhemberero dzekucherechedza makore makumi matanhatu ekuzvitonga kweTanzania muna Zvita 60 wegore rino, sezvo nyika iri kubuda zvishoma nezvishoma kubva mukukanganisa kwe Denda recovid9.
Tanzania National Parks, muchengeti weMountain kuchengetedza.
Matanho ekuchengetedza aripo, uye vafambi vari kusangana zvakare nevadikanwi vavo kunzvimbo dzakasiyana uko mweya yavo inoda kubatana.
Chakafukidzwa nemhute yenguva zhinji yezuva, Gomo reKilimanjaro, pakakwirira pakakwirira muAfrica, inzvimbo yakasarudzika yekushanya kuTanzania, inokwezva vanokwira zviuru makumi matanhatu pagore.
Iyo gomo inomiririra mufananidzo wepasi rose we Africa, uye yaro shongwe yakafukidzwa nechando-yakavharidzirwa yakaenzana koni yakafanana ne Africa.
Pakati penyika, iro dambudziko rekudzidza nezve, kuongorora, uye kukwira gomo risinganzwisisike rakabata fungidziro dzevanhu pasi rese. Kune vakawanda, mukana wekukwira gomo iri chiitiko cheupenyu hwese.
Muna 1961, mureza weTanzania ichangozvimiririra yakatakurwa kukwira mugomo kuti iturikwe pamusoro wayo wakachena. Tochi yerusununguko yakavhenekerwa pamusoro pechikwiriso zvakare kuitira kumutsa mishandirapamwe yekubatana, rusununguko, uye hukama.
Gomo Kilimanjaro rinoramba riri mucherechedzo uye kudada kweEast Africa nemukurumbira wayo wekushanya. Iri gomo repamusoro soro muAfrica rakanyorwa pakati penzvimbo 28 dzevashanyi pasirese inokodzera kuve hupenyu hwehupenyu hwese.
Vashanyi vasingakwanise kukwira kumusoro kwayo vanogona kunakidzwa nekuona runako rwayo rwekuzvarwa kubva kumisha kwavanokwanisa kutora mifananidzo yeiri monolithic gomo.
Chris Lyle anoti:
Svondo 16, 2021 pa 01: 34
Kutenda nechinyorwa chikuru, kudzosa ndangariro huru. Ini, zvakare, ndaive pamusoro peKirimanjaro iro risingakanganwike Zuva reRusununguko reTanganyikan makore makumi matanhatu apfuura, ndichirova hitch kumaodzanyemba kubva kuchikoro muNairobi. Pakudzoka zambuko paNamanga rakanga rakazara nemvura uye isu takarapwa kuona Jomo Kenyatta achitakurwa pamusoro pemafupa akasara achiendeswa kubva kumota kudivi reTanganyikan kuenda kune rimwe kudivi reKenya. Pakadonha mvura zuva raitevera takakwanisa kuzviwisira pachedu pamubhedha werwizi. Ndingafarire kugovera zvimwe zviyeuchidzo kana paine kufarira.